Soosaarayaasha Cirbadaha Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Cirbadaha Shiinaha
Mitirka Fashilka Wadnaha
Hal wajiga sariirtaada
Baalleyaasha ayaa leh laba macne. Midka kowaad: Baakadaha waa ereyo loo adeegsado warshadaha maraakiibta iyo saadka. Waxay tixraacayaan badeecadaha la soo dhoofiyo ama laga dhoofiyo badda ama hawada ama gaadiidka isku dhafan ee ku jira gacanta milkiilayaasha xamuulka. Waa weydiinta milkiilaha xamuulka. Milkiile kasta oo xamuul ah wuxuu u baahan yahay in ka badan hal baaritaan oo ah baahida adeeg kasta ee saadka. Qiimuhu waa ka fiican yahay seddex. Sidaa darteed, marka loo eego qaab-dhismeedka ganacsi ee soo jireenka ah, waxaa jira tiro badan oo santuuqyo ah. Nooca labaad: Pallets, a ...
Sanduuqa qaybaha gadaal-sudhan ayaa inta badan ka samaysan co-polypropylene iyadoo la isku duro, oo leh awood farsamo oo wanaagsan, miisaan fudud, nolol adeeg dheer iyo adeegsi habboon. Kaliya looma adeegsanin iyadoo lala kaashanayo khaanadaha khafiifka ah iyo armaajooyinka keydinta, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa iyadoo lala kaashanayo qalabka wax lagu rakibo, kuraasta shaqada ee looxyada lagu xiro, armaajooyinka derbiga laalaada iyo qalabka kale ee shaqada ee looxyada lagu xiro. Adagnaanta sare ee habka isticmaalkeeda ayaa kaa caawinaysa si dhab ah Si aad u badbaadiso booska una yaraato ...
Qashinku waa weel lagu keydiyo qashinka, kaas oo leh shaqo la mid ah tan qashinka, guud ahaanna waa afar gees ama afargeesle. Qashinka nooca xayeysiiska ah ayaa caan ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa bulshada, jardiinooyinka iyo meelaha kale ee bulshada. Qashinka qashinka ayaa u soo bixi doona nooc cusub oo ah qashin-qaadista qashinka caqliga badan. Sirta ayaa ah inay jiraan tunnel dhulka hoostiisa ah iyo mashiinka pneumatic-ka oo ku hoos jira qashin kasta oo bulshada dhexdeeda ah, sida bulaacada oo kale, hoosta ficilka mashiinka pneumatic. Gawaarida ...
Magaca Qaybta Laba-geesoodka ah al Sariirta laba-geesoodka ah ee D4-1111 Lambarka: KH170384 Cabbirka Qaybta: 1100 * 1100 * 140 mm Miisaanka Qaybta ： 19.28kg Qaybta Jiifka Qaybta Sariirta waa mid aad u adag in la is dulsaarayo, xoog rogrogmada, xoogga saxanka hoose, hoos u dhaca , celcelis ahaan culeyska culeyska iwm Pallet Dolly isku darka Pallet Daboolka Miisaanka oo yaraanaya daruuriga oo keenaya geedi socod aad iyo aad u badan sida Mucell. Naqshadeynta Kaihu Teknolojiyada Sariirtaada naqshadaynta iyo soosaarida Qaybta naqshadeynta / falanqaynta CAE / Falanqaynta socodka caaryada Mucell geedi socodka sariirtaada Load Be ...
Sanduuqa Weyn ee Weyn (nooca 5)
Crate-ka Warshadaha Weyn (5-ta nooc) Cabbirka Qaybta: 1200 X 1000 X 731mm 1200 X 1000 X 821mm 1200 X 1000 X 547mm Cabirka Wejiga: 2560x2130x1560mm Miisaanka Qaybta ： 19.28kg Pallet Part Feature Pallet waa mid aad u adag isugeynta, jilicsanaanta, saxanka hoose xoog, xagal hoos u dhac, celcelis ahaan culeys iwm Istaraatiijiga Dolly isku darka Khaanadda Daboolka Khafiifka ah ee dhimista daruuriga ayaa keenaya geedi socod aad iyo aad u badan sida Mucell Naqshadeynta Kaihu Technology Pallet naqshadeynta naqshadeynta iyo soosaarida Qaybta naqshadeynta / falanqaynta CAE / Falanqaynta qulqulka caarada ...
Canabka Isku Laabidda Cinabka
Cinabka Isku Laabista Cinabka Qaybta Magaca: Cawska laalaabka cawska Moldka caaryada: 1790X1090X1057 mm Miisaanka caaryada: 11Ton Cabbirka Qaybta: 710X953X26 mm Miisaanka Qaybta: 650g Pallet Part Feature Pallet waa mid aad ugu adag isugeynta, xoogga jilicsanaanta, xoogga saxanka hoose, hoos u dhaca xagasha, culeyska celceliska xoog iwm Wallet Dolly iskudhaf Pallet Daboolka Miisaanka oo yaraanaya daruuriga keenaya geedi socod aad iyo aad u badan sida Mucell. Kaihua Teknolojiyada sariirtaada Naqshadeynta naqshadeynta iyo soosaarida Qeybta Naqshadeynta / Falanqaynta CAE / Falanqaynta socodka Qaab Muce ...